हिमाल मा उहाँले bovids को परिवार पर्छ भनेर एक आश्चर्यजनक सुन्दर जनावर बस्थे। तपाईं सेतो कोट यी सुन्दर मानिसहरू cliff एउटा ठाडो भीर बन्द हाम फाल्ने हेर्न पर्याप्त भाग्यशाली हो भने, अमरीकी एक जीवनकालमा लागि सम्झना छ। पर्वतमा बाख्रा - यो प्रकृति को चमत्कार भनिन्छ। यो लेख पढ्ने पछि, तपाईं यी सींग आरोहीहरूको बारेमा धेरै रोचक तथ्य जान्न हुनेछ।
पर्वतमा बाख्रा: विवरण
रक्स बीचमा प्रत्यक्ष बाख्रा अत्यन्तै ठूलो हो: वयस्क को वृद्धि 90-140 किलो तौल संग, 100-106 सेमी पुग्यो। पुरुषहरु सजिलै अन्यथा यो "बालिका" को "केटाहरू" छैन उपस्थिति मा धेरै फरक छन्, एक धेरै ठूलो द्वारा महिलाहरुको देखि प्रतिष्ठित गर्न सकिन्छ। यो पहाड बाख्रा आफ्नो सीङ, जो छैन आकार धेरै ठूलो संग एक सरल घर जस्तो देखिन्छ। तिनीहरूले अपेक्षाकृत सानो, चिल्लो, अलिकति बाङ्गो आकार हो। मौसम परिवर्तन रंग को सीङ आधारमा। न्यानो महिनामा तिनीहरूले खैरो हो, र चिसो हिउँदमा - कालो।
एक शक्तिशाली घाँटी मा मध्यम आकार को लम्बी टाउको धारण। को दाढी त्यहाँ एक विशेषता दाढी छ। बाख्रा को बलियो खुट्टा गर्न Limbs पहाड Jumpers र अति बलियो, धन्यवाद सजिलै ठाडो र खतरनाक ascents र descents सामना। Hooves कालो। पुच्छर लगभग सजिलै देखिने छैन किनभने यसको रसीला फर को, त्यसैले छोटो छ।
यी पशुहरू एक विशिष्ट सुविधा आफ्नो आश्चर्यजनक सुन्दर कोट छ। विशेष हडताली हिउँदमा यसको भव्य दृश्य छ। यस समयमा, सेतो कोट विशेष बाक्लो, लामो, रसीला fringe droops छ।
कुनै उचाइ र चट्टानको एक पहाड बाख्रा रूपमा एक यस्तो जनावर को डर छैन। प्रकृति को एक बोल्ड सिर्जना गरेर Inhabited, अनुमान गर्न सजिलो - हिमाल मा। दुर्भाग्यवश, artiodactyla डाटा जनसंख्या घट्छ। जंगली, यस हिउँ-सेतो पहाड बाख्रा मात्र उत्तर अमेरिका मा ठाडो भीर को ढलान फेला परेन। Horned आरोहीहरूको को चुचुराहरूको अप 3000 मिटर गर्न जित्न सक्छौं।
प्राचीन समयमा, पहाड बाख्राको उत्तर अमेरिका को सबै रिक्त स्थान मा बस्थे। तर समय, मान्छे आफ्नो घरमा तिनीहरूलाई विस्थापित गर्न कदम कदम। पशुहरू एकान्त र सौहार्द को खोज मा टाढा जान थियो।
जंगली जीवन को एक तरिका
पहाड बाख्राको एक gregarious पशु हौं छैन। तिनीहरूले एक्लै वा सानो समूह (3-4 व्यक्तिहरूलाई) मा बाँच्न सक्छ। एक दुर्लभ बीच द्वन्द्व, एक खराब द्वन्द्व तानाबाना बिकसित हुँदैछ भने, स्थिति सन्तुलनमा गर्न मद्दत गर्छ जो kneeling मुद्रा, ले। शान्त यी पशुहरू को प्रकृति। तिनीहरूले खाना उपलब्ध गर्न, एक यायावर जीवन नेतृत्व गर्न हुनत, धेरै सक्रिय निष्क्रिय छैनन्।
चट्टानहरु मा सार्ने, पर्वत सेतो सुंदरियों हतार गर्न रुचि छैन, कुनै पनि अचानक आन्दोलनहरु बनाउन चाहनुहुन्छ र सायद आवश्यकता बाहिर फड्को, छैन। बिस्तारै वास्तविक आरोहीहरूको जस्तै cloven-hoofed dizzying हाइट्स गर्न चढ्नु व्यवस्थापन गर्नुहोस्।
ठूलो शक्तिशाली शरीर बाख्राको सानो ढुङ्गामा hooves राख्न रोक्दैन। भने, ठाडो भीर चढाई पछि पशु देख्नुहुन्छ कि बस पनि7मीटर को एक उचाइ देखि, तल हाम फाल्न तल प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। यो जम्प पहाड बाख्रा 60 डिग्री सम्म घुमाउन सक्छ। को खुट्टा एक Touchdown लागि पनि जमीन पाउन सक्नुहुन्छ भने, यो सिर्फ तिनीहरूलाई धक्का र निर्धक्क भई खुट्टा उदाउँदैन गर्दा अर्को जम्प बनाउँछ।
4.7 sq.km. - क्रममा पहाड बाख्राको बारेमा 4.5 को एक क्षेत्र कब्जा, आफूलाई खुवाउन शरद ऋतु मा, तिनीहरूले हिमालहरूको दक्षिणी र पश्चिमी ढलान गर्न बसाइँ सर्छन्। बेसी मा रुचि छैन तल, अझै हिउँ को तह ढाकिएको छैन कि ढलान पत्ता लगाउन प्रयास गर्नुहोस्।
बिहान र साँझ पहाड चराई जनावर। चन्द्र को भू-भाग राम्रो, बाख्रा को भोजन illuminates र जारी सूर्य तल जान्छ पछि भने। घाँस, जंगली घास, मश, ब्रश, रूखहरू शाखा, lichens: मेनु प्रविष्ट गर्न सबै तिनीहरूलाई उपलब्ध वनस्पति। काई र lichens शाकाहारी सुन्दर हिउँ को hooves अन्तर्गत देखि बाहिर खन्नुहोस्। shrubs, पात र छाल gnaw को शाखा। कैद, पहाड बाख्राको एक मनपर्ने व्यवहार - फल र तरकारी।
पहाड बाख्राको polygamous जनावर, प्रत्येक अन्य लोयल्टी छन्, तिनीहरूले फरक छैन। सिजन संभोग चिसो मौसम मा पतन: नोभेम्बर र डिसेम्बर। यो समय मा, पुरुषहरु एक विशेष तरल फैलाउने द्वारा क्षेत्रमा चिनो गर्न थाल्छन्। Peculiar मायालु पुरुष को महिलाहरुको अनुसार आफ्नो लेबल गंध। बाख्रा सीङ लागि उहाँले यसरी सबै आफ्नो असामान्य गन्ध छोडेर रक्स र रूखहरू विरुद्ध सीङ मालिश त्यसैले यो तरल पदार्थ secretes कि ग्रंथि छ।
बैठक गर्दा महिला बाख्रा हिउँ हामी छेउमा आन्दोलनहरु देखि पालन भने, असामान्य र पनि हास्यास्पद उनको पक्षमा कमाउन पर्छ। उसले अगाडि जमीन मा एक प्वाल खन्नुहोस् आफ्नो हिंद खुट्टा मा बस्छन। त्यसपछि, आफ्नो चुनिएको एक को एडी मा हिड्ने नम्रता सबै प्रकारको देखाउन लागि झुकेको limbs मा आफ्नो जिब्रो बाहिर टाँसिएको। यो सबै प्रदर्शन reciprocated पहाड बाख्रा प्ले छ। पछि सींग प्रेमी महिला पक्ष मा अलिकति मारा, र त्यो बारी त्यसै हुनेछ, यो स्पष्ट जोडीलाई आपसी सहमति गरेर आयोजित कि बन्नेछ।
छ महिना भित्र, पहाड बाख्रा posterity फलाउँछ। जन्म दिने भन्दा अवस्थामा ज्योति3किलो वजन गर्ने एक बच्चा छ, जबकि, आफ्नो खुट्टामा सधैं छ। नवजात शिशुहरु, धेरै सक्रिय छन् जीवनको पहिलो दिन संग, तिनीहरूले चाँडै र एक भोक आफ्नो आमाको दूध खुवाइन्छ जान्छन्। दूध आहार बाख्राको को 30-35 दिन शाकाहारी खाना खान सुरु गरेपछि आफ्नो आमा र समूह को अन्य सदस्यहरु संग खुरचना।
पर्वतमा बाख्रा: रमाइला तथ्य
जीवन शैली, पहाड मुख्यतया कारण यी अद्भुत प्राणीहरू गर्न पहाडी भू-भाग, घर गर्न, असामान्य बाख्राको। त्यहाँ सेतो सुंदरियों बारेमा धेरै रोचक तथ्य हो:
हिउँ बाख्राको पनि बलियो हावा संग pyatidesyatigradusnye चिसो डर छैन। यस्तो चरम मौसम जनावर राम्रो तरिकाले बाक्लो, रसीला, न्यानो ऊन सुरक्षित छन्।
स्थिति र आवश्यकता निर्भर भएको टाप मा विभाजित, यो घटना र विस्तार हुन सक्छ। यो जनावर संग कुनै 60 भन्दा बढी डिग्री को एक ढलान संग कुनै पनि भू-भाग लैजान सक्षम छ।
पहाड को समूह मा मातृत्व शासनकालमै बाख्राको: नेता एक महिला छ।
कहिलेकाहीं तिनीहरूले solonetz मा हिड्ने मात्र पहाड बस्ने, को जंगल मा वा क्षेत्रमा हिउँ बाख्रा हुन सक्दैन हेर्नुहोस्।
प्राचीन समयमा, भारतीयहरुलाई रक्स फर पहाड बाख्राको molting समयमा बगाएको कि भेला भए। Fluff बाख्राको wools उत्पादन।
तिनीहरूले उच्च उचाईमा आन्दोलन मा वास्तविक विशेषज्ञहरु छन्।
बाख्रा Willow - बगैचा सजावट
घरमा tulip रूख। Tulip रूख फूल जब
को अणु के हो र यो अणु भिन्न कसरी
तपाईंले पहिले थाहा थिएन भ्यागुतो बारेमा यी तथ्यहरू
Pur नदी: विवरण र फोटो
उद्यममा आविष्कारहरूको लेखा
वायदा को समाप्ति। स्थिति कसरी नियन्त्रण गर्ने?
चिनियाँ जुनिपर stricta: रोपण र हेरविचार
Geysers: समीक्षा र प्रयोगका शर्तहरु
Biggz Dzheyson: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन। शीर्ष चलचित्र
के पानी प्रवाह गठन? Riverbed - यो के हो?
को sigmoid पेट को Adenocarcinoma: कारण, लक्षण, उपचार र prognoses
कट्टर - को यूराल मा प्राचीन शहर
केक बिस्कुट र पनीर "Hut": मुख्य विकल्प
किन गन्ध smelled? हामी सिक्न!